Koorsooyinka ugufiican ee lagu barto Barashada Mashiinka iyo Barashada Qoto dheer - Ikkaro
Inicio >> Barashada Mashiinka >> Koorsooyin lagu baranayo Mashiinka Barashada, Barashada Qoto dheer iyo caqliga macmalka ah
Koorsooyin dhammaystiran, laga bilaabo bilowga illaa heer sare
Barashada Mashiinka by Andrew ng Malaha koorsada ugu da'da weyn uguna caansan ee loo yaqaan 'ML'. Waan kaqeyb galay sanadkii hore. Waa aragti ahaan. Waxaad baraneysaa aasaaska sida barashada mashiinku u shaqeeyaan laakiin waxaan u maleynayaa inay u baahan tahay culeys wax ku ool ah. Bidix xiriir dib u eegista in aan sameeyay koorsadan haddii aad rabto inaad ogaato.
Koorso dhakhso AI by soon.ai
Barashada Mashiinka Dhexe waxaa baray Kaggle waa sii wadida koorsada bilowga ah ee aan horay u soo aragnay. Waxaad heli doontaa moodello sax ah oo waxtar leh.
Barashada qoto dheer ee Google (3 bilood) (Dhexdhexaad illaa heer sare) Waxaa soo saaray Audacity oo uu weheliyo Vincent Vanhoucke, Maamulaha Sayniska ee Google, iyo hoggaanka farsamada kooxda Maskaxda Google.
Koorsooyinka lacagta la bixiyo
Hubaashii koorsada ugu fiican ee lagu barto Barashada Qoto dheer iyo Barashada Mashiinka.
Takhasuska Barashada Qoto Dheer by Deep Learnin AI - Waa koox koorsooyin takhasus gaar ah u leh takhasuska waxbarashada qoto dheer. Master Master Barashada, iyo hordhaca Sirdoonka Artificial. Koorsooyinka takhasuska ah ee uu hogaaminayo Andrew Ng inuu barto DL. Waa koorso lacag la bixiyo, waxay ka kooban tahay 5 koorso hoosaad waxaadna bixinaysaa $ 40 bishii ilaa aad ka dhameysid (waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan 3 bilood - qiyaastii 11 saacadood usbuucii laakiin waxaad ku sameyn kartaa xawaarahaaga. Shanta koorso waa:
Shabakadaha Neural iyo Barashada Qoto dheer
Hagaajinta Shabakadaha Qotada Dheer: Isugeynta Hyperparameter, Regularization iyo Optimization
Dhismaha Mashaariicda Barashada Mashiinka
Shabakadaha Quwadda ee Kala-duwanaanshaha
Qaababka isku xigxiga
Tartamada Kaggle Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee wax walba oo aad baraneyso loogu dhaqmo si ficil ah sidaa darteedna wax badan u barto oo dhab u ahaato. Kuwani waa tartamo dhab ah halkaasoo ay dhibaatooyin nooga geystaan ​​oo ay na siinayaan xogta.
Iyo in la dhammaystiro macluumaadka iyo ilaha xiisaha leh ee ku saabsan Sirdoonka Artifishalka buuggan
Buug barasho qoto dheer
Python oo loogu talagalay Sayniska Xogta
Mid ka mid ah xirfadaha ugu waaweyn ee looga baahan yahay in la barto, ama halkii laga shaqeyn karo oo la isticmaali karo ML, DL iyo AI waa in la ogaado Python. Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa R ama luqado kale oo barnaamij ah laakiin Python waa tan ugu ballaaran ee la isticmaalo waxaana kugula talinayaa inaad isticmaasho maadaama ay u adeegi doonto aagag kale oo badan.
Kaggle waxaad ka heli kartaa koorso yar oo leh aasaaska aasaasiga ah ee bilowga ah ee aan waligood taaban Python.
Waxaan kusii cusbooneysiin doonaa liiska waxyaabo qabow badan oo aan helo. Haddii aad taqaanno mid aan liis garayn waxaad ka bixi kartaa faallo.
Adduun buluug ah. Socodka badaha, mustaqbalka ...
Categories Barashada Mashiinka Tigidhka tigidhka
1 Koorsooyin bilaash ah
1.1 Kuwa bilowga ah
2 Koorsooyin dhammaystiran, laga bilaabo bilowga illaa heer sare
3 Koorsooyinka lacagta la bixiyo
4 Kheyraadka kale
6 Python oo loogu talagalay Sayniska Xogta